बच्चाको नागरिकता कस्तो छ?
नागरिकता - एक विशेष देशमा एउटा स्थिर कानुनी एक व्यक्ति बीच सम्बन्ध तर केही छ। यो संवाददाता अधिकार र दायित्व, साथै जिम्मेवारी को पारस्परिक मा व्यक्त गरिएको छ। यो बच्चा को राष्ट्रियता कस्तो नियम स्थापित छ र के निर्भर अनुसार? जवाफ तल प्रदान गरिएको छ।
जूस sanguinis सिद्धान्त
बच्चा को नागरिकता आफ्नो आमाबाबुको राष्ट्रियता संग प्रत्यक्ष जडान मा अक्सर छ। यो कुरा अर्थ छ सही सिद्धान्त को रगत। तसर्थ, घटनाको कि दुवै आमाबाबुले (वा एक, यो एउटा मात्र छ भने) रूस नागरिक, तिनीहरूलाई बीचमा राज्य स्थापित नै कानुनी सम्बन्ध एक बच्चा छन्।
यस्तो प्रक्रिया भन्दा साधारण छ। रूस को एक नागरिक - यदि आमाबाबुले एक वा हराएको रूपमा मान्यता छ, यो एक stateless व्यक्ति छ, कुनै पनि अवस्थामा कुनै सम्बन्धन तर दोस्रो छ तपाईं के गर्नुहुन्छ? जूस sanguinis सिद्धान्त जस्ता परिस्थितिहरू, मा। एक बच्चाको नागरिकता एक रूसी रूपमा स्थापित छ। रगतको सही एक ग्यारेन्टी कि बच्चाको जन्म stateless बन्न गर्दैन हुन सक्छ। एक विदेशी र दोस्रो छ - यो पनि एक अभिभावक कहाँ अवस्थामा प्रभावकारी छ रूसी नागरिकता, एक राज्य आफ्नो हेरविचार अन्तर्गत बच्चा लिन छैन भने र।
जूस soli सिद्धान्त
बच्चाको राष्ट्रियता सीधा जन्म आफ्नो ठाउँमा सम्बन्धित छ जब अवस्थामा छन्। , केही परिस्थिति मा, मुद्दहरुलाई माटो को व्यवस्था गर्न बरु रगत भन्दा दिइएको छ। उदाहरणका लागि, बच्चाको आमाबाबुले भने - यो विदेशीहरू, तर बच्चा रूस को क्षेत्र मा जन्म भएको थियो, यो देश को नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दायाँ त्यहाँ जमीन र बच्चाको बाबु र आमा अज्ञात छ भने, र पछिल्लो छ महिना आफ्नो जन्म बितिसकेको छ। छ महिना पछि एक बच्चा रूस को एक नागरिक बन्नेछ। केही भ्रम पनि छन्। समस्या कसरी समाधान गर्ने, एक अभिभावक भने - एक विदेशी र दोस्रो - रूस को एक नागरिक? सुरुमा यस्ता मामिलामा यो जन्म स्थान खातामा लिएको छ। छोराछोरीको नागरिकता unconditionally तिनीहरूले राज्य भित्र जन्म थिए भने, रूसी रूपमा सेट। छोराछोरी माटो गर्ने अधिकार छैन भने, यो रगतको माथि-वर्णन सिद्धान्त सञ्चालन गर्न थाल्छ।
व्यवस्थाको लेख 12 को प्रावधान अनुसार "रूसी संघ को नागरिकता मा," यो रूस stateless व्यक्ति को अवस्थामा जोगिन खोज्ने कि कल्पित गर्न सकिन्छ।
बच्चा गर्न नागरिकता परिवर्तन मात्र आफ्नो आमाबाबुको सहमति हुन सक्छ। यस मामला मा, यदि लापरवाही बुबा वा आमा - वा दुवै - बच्चा अधिकार को deprived छन्, यो मुद्दा मा आफ्नो दृष्टिकोण छैन महत्त्वपूर्ण छ। नागरिकता प्राप्त वा 14 र 18 को उमेर को बीच एक बच्चाको रूपमा समाप्त भएको छ भने, यो मामला मा, यो आफ्नो व्यक्तिगत अनुमति आवश्यक छ। यो उमेर मा, एक व्यक्ति पूर्णतया आफ्नो कार्यहरू र गतिविधिहरु महत्त्व महसुस गर्न सक्छन्, त्यसैले यो सही संग endowed छ। यो पनि त्याग्न कि रूस को नागरिकता यो प्रक्रिया को परिणाम, व्यक्तिगत रंगभेद, वा हुन्छ भने, मामला मा असम्भव छ भन्ने तथ्यलाई उल्लेख गर्नुपर्छ एक व्यक्ति नागरिकता बिना।
व्यवस्था को स्रोतहरु को प्रकार
मास्को मा Tagansky रजिस्ट्री कार्यालय
को Kirov क्षेत्र को काखमा को झण्डा र कोट
Buryatia को काखमा को कोट र झण्डा कस्तो छ?
को खोपडी को उमेर सुविधाहरू। खोपडी बच्चा। को खोपडी को sutures: एनाटोमी
Polyclinic 4, Nizhny Tagil: ठेगाना र चिकित्सा सुविधा को विशेषज्ञता
Atriplex patula: वर्णन, लाभप्रद गुणहरू, आवेदन सुविधाहरू
प्रेम बलियो मदत गर्नेछ जो मनोवृत्ति बारेमा उद्धरण,
Maypole - विशेषता शानदार छुट्टी!
Laminate फर्श कसरी सफा गर्ने? laminate लागि डिटर्जेंट
बक्सर Lebedev डेनिस Aleksandrovich: जीवनी, खेल क्यारियर
कृत्रिम स्टोन: नयाँ विचार
आधुनिक खींच-बाहिर बच्चाहरु को लागि ओछ्यानमा
पूरा हाम्रो अंग्रेजी मित्र: Worcestershire सस
Copperhead: विषालु वा व्यक्ति लागि?